အကြံပေးသူမှ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရာရှိသည့် လမ်းဆုံများ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းကြောင်းများ၊ ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းများ၊ ကုန်းအတက်အဆင်းမတ်များ စသည်တို့အတွက် အန္တရာယ်ကင်းရန်နှင့် စံချိန်စံညွန်းများနှင့် ကိုက်ညီရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည်။ အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းကို ရေဆွဲပြီး ဒီဇိုင်းရလဒ်များကို နောက်တဆင့်တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာတွင် တင်ပြသွားမည်။ အန္တရာယ်ကင်းရေးအခြေအနေနှင့်ပါတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်လမ်း၏ ပထ၀ီအနေအထားအား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်း
လက်ရှိလမ်းမအ၀င်အား ပြန်လည်ညှိယူရန် အကြံပေးသူမှ စဉ်းစားထားသည်။ အစပိုင်းကို လက်ရှိ လမ်းဆုံ ၂ နေရာရှိ လမ်းအ၀င်နှင့်ကိုက်ညီရန် လက်ရှိလမ်းကြောင်းကို အကြံပေးသူမှ ပြန်လည်ညှိယူမည်။ ၄င်းနေရာများမှာ ဒီဝါဒဒါးကုန်းမြင့် (STA. KM. 27 + 250 မှ STA. KM. 28 + 250 ထိ) နှင့် စယ်ဒယ်ကုန်းမြင့် (STA. KM. 49 + 700 မှ STA. KM. 50 + 850 ထိ)
အကြံပေးသူမှ ၁၀%ထက်ပိုမတ်သော ဆင်ချေလျောအတက်အဆင်း (အထူးသဖြင့်ဆင်ငိုတောင်) ရှိ ၄၅ နေရာတွင် တည့်မှတ်မှုကွေ့များနှင့် အမြန်နှုန်းဒီဇိုင်းကိုပြန်လည်ညှိယူမည်။
မတ်စောက်သော တောင်တက်လမ်းများ၊ တောင်တက်ကွေ့များတွင် ကုန်တင်ယာဉ်များလွယ်ကူစွာတက်ဆင်းနိုင်ရန်နှင့် အခြားယာဉ်များအားနှောင့်နေးမှုမရှိစေရန် လမ်းကြောင်းပိုထည့်သွင်းဖောက်လုပ်ရန် အကြံပေးသူမှ စဉ်းစားထားသည်။ ကုန်တင်ယာဉ်များ အမြန်နှုန်းလျော့နဲသွားသောကြောင့် အခြားယာဉ်များကျော်တက်သည့်အခါ ယာဉ်တိုက်မှုများမဖြစ်အောင် ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကုန်တင်ယာဉ်များအတွက် လမ်းကြောင်းပိုများအား ၇ နေရာတွင်ထည့်သွင်း ဖောက်လုပ်သွားရန် ဒီဇိုင်းဆွဲရန် လိုသည်။
လမ်းဘေး သံဘောင်အတား၊ ကွန်ကရိအတား စသောလမ်းဘေးတစ်လျောက် လိုအပ်သောနေရာများတွင် အတားများထားရန်နှင့် လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်များတပ်ဆင်ရန်၊
လမ်းစည်းမျဉ်းဆိုင်းဘုတ်များ၊ သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များနှင့် လမ်းညွန်ဆိုင်းဘုတ်များအား နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းအတိုင်း လိုအပ်သည့်နေရများတွင်တပ်ဆင်ရန်၊
လိုအပ်သည့်နေရာများတွင် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွန်းအတိုင်း လမ်းဘေးတစ်လျောက်အမှတ်အသားများ ဒီဇိုင်းများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်၊
123 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
INDEX International Group Co.,Ltd.
1/814 Soi Amporn, Moo 17, Khu Khot Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani 12130
Decade Consultant Co.,Ltd.
1199 Piyawan Building, Floor 8, Paholyothin Road, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400
PSK Consultant Co.,Ltd.
1199 Piyawan Building, Floor 15 Room15 A, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District, Bangkok 10400